Dil aad loogu argagaxay ayaa ka dhacay magaalada Kansas oo loo geystay labo wiil oo… – Hagaag.com
Posted on 3 Maajo 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Magaalada Kansas City, ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka waxaa lagu dilay laba wiil oo walaalo ahaa da’doodana lagu sheegay 14 iyo 17 jirro, sida ay sheegeen booliska iyo qaraabada marxuumiinta.
Dhalinyaradaan oo ah walaalo ayaa lagu kala magacaabi jiray Cabdiraxmaan Xuseen Cabdicasiis iyo Cabdiwaaxid Xuseen, waxaana dilka u gaystay walaalkood ka weyn oo 25 jir ahaa xili ay ka soo baxeen salaadda Taraawiixda sida uu BBC-da u sheegay Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo ay ehel dhow ahaayen.
Hanad Cabdullaahi Cabdicasiis oo ah ninka dilka gaystay ayaa wiilasha uu dilay xagga hooyada walaallo kala ahaa, waxaana wararku sheegayaan in banaanka gurigii ay ku noolaayeen uu ku dilay labada marxuum xilli ay masaajidka ka soo baxeen.
“Waxay wax u dhaceen in labada wiil ee geeriyootay iyo wiil kale oo la socday ay ka soo baxeen Taraawiixda ragga masaajidka ku tukadda oo ka mid ah akhyaarta ayaa soo qaaday guriga illinkiisuu dhigay gurigii markay is dhaheen saddexdoodii gala ninka dili doona ka soo baxay meeshuu ku sugayay labada dhalinyarada ah” ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Cabdi.
“Labadan wiil oo xuffaad ah oo walaalaha ah waxay xalay ka tujiyeen taraawiixda masjidka Al-Taqwa ee magaalada Kansas City, Missouri. Waa 12 jir iyo 16 jir. Kadib, gurigooda hortiisa ayaa waxaa ku toogtay walaalkood ka wayn oo dhawr iyo 20 jir ah. Wiilashan hooyadood iyo aabahood-ba siyaabo aad u naxdin badan ayaa lagu kala dilay wax 10 sano ka yar. Waa imtixaan adduun. Subxaanallaah”, waxaa sidaasi bartiisa Facebook-ga ku soo qoray Maxamed Diini oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Mareykanka.
Maxamed Cabdullaahi Cabdi ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan ogeyn waxa sababay in Hanad walaalihii dilo inkasta oo falkaan uu yahay qadar Alle.
“Wuxuu ka mid ahaa dadka dhahaya dadbaan dilayaa dadbaan waxyeelleynayaa marka wax aan hubo oo aan u saarinayo ma jiraan balse waxaan is leeyahay cunugaan dhibaato maskaxiyan ah oo uu la tacaallayay mudaba ayaa ka tustay iyo waxyaabaha maandooriyaha ee la isticmaalo inuu dhaafiyo nafta caruurta walaalihiisa”, ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo BBC-da u waramayay.